बिनिताको नाममा उठेको यति धेरै पैसा खै ? बिनितालाई माया गर्ने सबैले यो भिडियो हेर्नुहोला ! - SudurSanchar
बिनिताको नाममा उठेको यति धेरै पैसा खै ? बिनितालाई माया गर्ने सबैले यो भिडियो हेर्नुहोला !
अर्की मम्मी बिहे त गर्नुहुन्ननी ? गुल्मीकी बिनिता कुमालले जिटिभिले लिएको एक भिडियोमा आफ्नो बुबालाई प्रश्न गरेकी छिन् । उता बाट बाबुले गर्दिन भन्ने उत्तर दिन्छन् । ३ वर्ष अगाडी रोजगारीका लागि साउदी अरब गएका विनिताका बुबा भोजराज कुमालले काम गर्ने क्रममा मेसिनमा प’रेपछि दुवै खु”ट्टा गु”मा”उ”न पुगे।
श्रीमतीले पनि छोडेर अर्कै संग विहे गरेपछि ससाना नानिबाबुको वि”च”ल्ली भएको छ । एता बुढा बा आमाको बस्ने घर छैन बाटोको छेउमा कसैको भ”त्कि”न लागेको घरमा यो परिवार बस्दै आएका छन । पैसा कमाउन विदेश पुगेका भोजराज करिब ८ महिना देखी हस्पीटलमा छन । परिवारमा आर्थीक अभावको कारण नेपालमा भोका छोरा छोरी बाबाको प्रतिक्षामा छ् । तर बाबा भने हस्पिटलमा मृ”त्यु संग ल”डे”रहेका छन् । बाँकी भिडियोमा ।